DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay xubno ka mid ah golaha wasiirrada Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay xubno ka mid ah golaha...
DHAGEYSO: Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay xubno ka mid ah golaha wasiirrada Somaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaaay xubnaha Puntland ku metala Golayaasha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Mr. Deni ayaa la wadaagay xubnahan warbixin ku saabsan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda doorashada ee dalku marayo iyo dadaalka Puntland ugu jirto inay qabsoomto Doorasho la isla ogolyahay oo wakhtigeeda dhacda.
Xubnaha Golaha Wasiirrada ee uu la kulmay Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa kamid ah, Sii-hayaha Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka Badda DF Soomaaliya, Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo Xubno kale.
Afhayeenka Madaxtooyada Puntland, Jaamac Yuusuf Dabaraani ayaa Warbaahinta u sharraxay waxyaabaha ugu muhiimsanaa kulanka oo ay ka wad hadleen Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Golaha Wasiirrada.
Halka hoose ka dhageyso Codka Afhayeenka Madaxtooyada Puntland:
Xubnaha golaha wasiirrada ku matala Puntland